मेरो खुशी : विद्यालयको नेतृत्व गर्न पाउँदा ... - Goraksha Online
बिक्रम बाठामगरलाई बर्ष उदयमान प्रशिक्षक अवार्ड
मेरो खुशी : विद्यालयको नेतृत्व गर्न पाउँदा …
मैले सेण्टर स्करुलबाटै कखरा सिकेको हुँ । जुन विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मको पढाई सकेर म राजधानी पढ्नका लागि गएँ । राजधानीमा थापाथलीबाट २०५२ सालमा एसएलसी पास गरेँ । त्यो पनि ३९ प्रतिशत पास भएकोमा म पनि त्यसमा परेँ । तुलसीपुर–६ निवासी हाल सेण्टर माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लेखतराम पौडेलले भने । उनले जीवनका उकालीओरालीहरुमा धेरै संघर्ष गरे ।
कहिले विभिन्न संस्थाको जागिर र कहिले विदेशमा गएर संघर्ष गरेको सुनाए । पौडेलले २०५३ सालमा स्वतन्त्र बामपन्थीबाट चुनाव लडेर बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सदस्य भएर समेत काम गरे । त्यसमा पनि उनी शिक्षाको सुधार र विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नतिका लागि लागेको सुनाए । त्यस सँगैसँगै उनले आप्mनो सन्तानलाई पढाउन सेण्टर स्कूलमा भर्ना गरेको सम्झिए ।
त्यहाँ पढाई राम्रो नभएपछि एक निजी बोर्डिङ स्कूलमा भर्ना गर्ने सोचमा आफू गएको र सेण्टर स्कूलमा राम्रो पढाई हुन्न त्यहाँ पढेको विद्यार्थीलाई आप्mनो बोर्डिङमा भर्ना गर्न नसक्ने बताएपछि निराश भएर फर्किएको सुनाए । त्योसँगै उनलाई विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि लाग्ने अठोट बोकेर २०६९ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चयन भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
त्यो पनि सर्वसम्मतिमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको सुनाए । उनले नेतृत्व गरेको विद्यालयमा हाल प्रविधि विषयसँगै विद्यार्थीको अत्यधिक चाँप रहेको छ । ‘कखरा सिकेको विद्यालयको शैक्षिक सुधार गरी विद्यालयलाई दाङमै नमुनायोग्य बनाउन सफल भएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । ‘मेरो पहिलो खुशी सेण्टर स्कूलको शैक्षिक र भौतिक विकास हो, यो नै मेरो खुशी हो ।’
कक्षा १० सम्म पढाई हुँदै आएको विद्यालय आफू आएसँगै इलेक्ट्रोनिक ओभरशेयर, आइटी ओभरशेयर विषय पढाई सञ्चालन गर्न पाउनु आप्mनो लागि गौरवको विषय भएको बताए । त्योसँगै अंग्रेजी र नेपाली विद्यालयमा पढाई सुरु गरेको बताए । ‘त्यो पानी चुहिने टहरामा सञ्चालन भएको विद्यालय आज यहाँसम्म आएको छ, यो भन्दा ठूलो खुशी मेरो लागि के हुनसक्छ र ?’ पौडेलले भने । उनले आफूलाई विश्वास गरी तीन–तीन पटकसम्म विद्यालयका नेतृत्व गर्ने अवसर दिएकोमा पनि खुशी व्यक्त गरे ।
पौडेलले आफू विद्यालयमा प्रवेश गर्दा विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक अवस्था र भौतिक अवस्था निकै दयनीय भएको भन्दै त्यसको सुधार गर्न पाउँदा अर्को खुशी पलाएको बताए । पहिले विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्थामा रहेको विद्यालयमा हाल विद्यार्थी संख्या बढी भएर भर्ना लिन नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले खुशीसँगै त्यसमा अलि दुःखको महशुस भएको सुनाए । ‘अहिले करिब १३ सय विद्यार्थीहरु यहाँ अध्ययन गर्ने गरेका छन्, शैक्षिक, भौतिक सबै अवस्था राम्रो छ’ उनले भने ।
पौडेलले विद्यालयको अवस्था सुधार गर्नका लागि आफूलाई धेरै समस्या आएको भन्दै समस्यासँग जुझेर लक्ष्यमा पुगेकोमा पनि खुशी व्यक्त गरे । ‘सुरु–सुरुमा म अध्यक्ष भएर आएपछि विद्यालयको सुधार गर्दा निकै कठिन भयो तर विस्तारै सिष्टममा आयो’–उनले भने ।
अध्यक्ष पौडेलले आप्mनो काममा सबै राजनीतिक दल, प्रधानाध्यापक, शिक्षक अभिभावकले साथ दिएको र उनीहरुको साथ पाउँदा समेत खुशी लाग्ने गरेको बताए । ‘मैले सबैको मन जितेर विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याएको छु, म विद्यालयमा २४सै घण्टा पहरेदार बनेर काम गरेको छु, यसमै म खुशी छु’–उनले भने ।
पौडेलले आफू सामान्य परिवारमा जन्मेको र शिक्षालाई बुझेकाले केही गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि लागेको र त्यसमा परिवारबाट र सबै क्षेत्रबाट सहयोग पाउँदा खुशी लागेको बताए । ‘म लगातार तीन पटकसम्म विद्यालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ तर विद्यालयको नेतृत्व अब भने छोड्छु भनेको थिएँ र पनि फेरि तपाईंले नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो, यो सँगै झनै आत्मविश्वास र जिम्मेवारी थपिँदा खुशी लागेको छ –पौडेलले भने । त्यस्तै पहिले कमजोर भएको विद्यालयबाट हाल विद्यार्थीहरुले जिल्ला टप गरी विद्यालयको सान र मान राख्न सफल भएकोमा पनि खुशी व्यक्त गरे ।
उनले विद्यालयमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट विषयको पढाई सुरु गर्न लागेको भन्दै यसमा पनि खुशी लागेको बताए । जिल्ला सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सहसचिव समेत रहेका पौडेलले सो समितिमा बसेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा लाग्न पाउँदा पनि खुशी लागेको बताए । उनले अर्को खुशी आफूले सेण्टर स्कूलमा पढ्दा जहिल्यै पनि प्रथम हुने गरेको र पछि सधैँ पढाईमा दोस्रो स्थान आउने गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
उनले आप्mनो कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण आइकमसम्म पढेर पनि छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन पाउँदा खुशी लागेको सुनाए । एउटा छोरीले व्याचलर र अर्को छोरीले आप्mनै विद्यालयमा इलेक्ट्रोनिक ओभरसियर पढिरहेको भन्दै छोराछोरीले पनि बाटोमा लागेर पढिरहेकामा खुशी व्यक्त गरे ।
त्यस्तै यस अघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रमा प्राविधिकको काम समेत गरेका पौडेलले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर विद्यालयमा सोलार जडान गरी कम्प्यूटर शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउँदा आर्को खुशी प्राप्त भएको सुनाए । ‘म नेपालका दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म पुगेर विद्युत नभएको स्थानमा सोलार जडान गरी विद्यालयमा कम्प्यूटर शिक्षा दिनमा सहयोग पुगेको छ । त्यसमा पनि म धेरै खुशी छु’ –पौडेलले भने । उनले नेपालका विभिन्न दुगर्म र विकट क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा पुगेर सेवा गर्न पाउँदा निकै गर्वको अनुभूति भएको सुनाए ।
त्यस्तै नेकपाका नगर समिति सदस्य समेत रहेका पौडेलले पार्टीको नेतृत्व र पार्टीले गर्ने गतिविधिहरुमा लाग्न पाउँदा अर्को खुशी लागेको बताए । वडा नं. ६ का वडाध्यक्षको दाबी गरेका पौडेलले आफूले अर्को व्यक्तिलाई समर्थन गरेर उनले जित्दा पनि खुशी लागेको बताए । ‘मैले पनि वडा नं. ६ को वडाध्यक्षको दाबी गरेको थिएँ तर पछि नवराजजीलाई समर्थन गरी उहाँलाई चुनावमा जिताइयो यसमा पनि म खुशी छु’–उनले भने ।
त्यस्तै गाउँघरमा हरेक विकास निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न र गाउँको विकास गर्न पाउँदा खुशी लागेको सुनाए । तुलसीपुर–६ गोलौरी निवासी लेखतराम पौडेल सेण्टर मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन् ।
प्रस्तुती : बालाराम खड्का
खोलाको बगाएको एम्वुलेन्सलाई डोजरले निकालियो
इमानदारिता समृद्धिको आधार हो